Tag: isdhexgal | Martech Zone
Geli: Astaamaha Ka Qeyb Qaadashada Barnaamijka Moobilka Aan Xadidneyn
Khamiista, Sebtember 22, 2016 Wednesday, September 28, 2016 Douglas Karr
Gelinta waxaa loo qaabeeyey si ololayaasha barnaamijka moobiilka ay u fuliyaan suuqleyda iyada oo aan loo baahnayn horumarinta barnaamijka mobilada. Barxadku wuxuu leeyahay qaabab fara badan oo ka qaybqaadasho ah oo si fudud loo gelin karo, loo cusbooneysiin karo, loona maamuli karo. Noocyada kala duwan ee qaababka waxaa loo dhisay suuqgeeyayaasha iyo kooxaha wax soo saarka si ay u gaar yeelaan safarka isticmaalaha, kiciyaan wakhti kasta, kordhinta hawlgelinta, iyo cabbiraadda iyo falanqaynta waxqabadka barnaamijka. Barnaamijyadu waxay ku dhasheen macruufka iyo Android. Tilmaamaha ayaa burburay